Tourists are Visiting Myanmar through Tachileik Border Gate
Nay PyiTaw, 18th January Tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs and traditions, lifestyles of different ethnic groups through International gateways and Border Gates. From 4th January to 17 January in...
An awareness workshop held for Hygienic Food Production at Ngwe Saung Beach
Jan 17, 2019 | News
Nay Pyi Taw, 17th January With the cooperation of the Ministry of Hotels and Tourism (MOHT) and Department of Food and Drug Administration (FDA), an awareness workshop for hygienic food production at the popular destinations of Ayeyarwady Region was held at...
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မိုးကုတ်မြို့သို့ ၀င်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသားစာရင်း
Jan 16, 2019 | News
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မိုးကုတ်မြို့သို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် (၁၃၅) ဦး...
Tourists visit Myanmar by their own motor vehicles
January (16), Nay Pyi Taw The Ministry of Hotels and Tourism is currently establishing for comfort visit of international tourists in Myanmar in all several ways and tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးနှင့် တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး ချယ်ရီပင် စိုက်ပျိုးပွဲတော် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၅) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံဖြိုး တိုးတက် စေရန်နှင့် မြန်မာ - ဂျပန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပြယုဒ်အဖြစ် တတိယအကြိမ်မြောက် ချယ်ရီပန်းပင် စိုက်ပျိုးပွဲ တော်အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်၍...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ အပျော်စီးရေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်လျှက်ရှိ
Jan 15, 2019 | News
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁၅)ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ကွန်ပျူတာ (အခြေခံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
Jan 14, 2019 | News
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၄) ရက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ရှိ ဒေသခံလူငယ်များ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊...
မကွေးမြို့တွင် Hotel Operation Management သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော် ၊ ဇန်န၀ါရီ (၁၄) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (မကွေးရုံးခွဲ)၏ကြီးကြပ်မှု ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး...
Journey to the Naga-Land Rally Sagaing/MHTTR 7-2019 Car Racing Opening Ceremony
Naypytaw, January 11 With the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and Monya Branch as well as support of the Sagaing Regional Government , Journey to the Naga-Land Rally Sagaing/MHTTR 7-2019 Car Racing Opening Ceremony was held in front of the Monya City...
မိုးကုတ်သို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသားဦးရေစာရင်း
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၁)...
« First« Prev...89101112...203040...Next »